Osage Beach Akukho zinyuko • Waterfront • Wifi • Pool
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguGary
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uGary iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Yonwabela phambi kwamanzi, akukho zinyuko, akukho zitebhisi, iyunithi yokugqibela kwi-21MM e-Osage Beach! Indawo ezolileyo entliziyweni yeChibi le-Ozarks.
Ukubonelela ngeelinen ezintsha, iibhedi, 50” TV, intambo, iRoku, iWiFi ekhuselekileyo, iDVD player, isikhululo sokutshaja esofa. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo - yiza negrosari yakho. Yonwabela ichibi elinzima. Ipaki ngaphandle komnyango wangaphambili. I-Complex inerempu kunye ne-trailer yokupaka (buza malunga neenkcukacha). Iintlanzi ezivela kwiidokhi, zidada kwi-cove, kwaye kufutshane nayo yonke into! Ilungele izibini ezimbini okanye usapho oluncinci.
Ihlaziywe, igumbi elinye kwigumbi lokulala elizolileyo elineembono eziphambili zesitishi. Kubandakanya ibhedi elingana nokumkanikazi, ibhedi entsha kunye neelinen. Ibhedi yesofa kwigumbi lokuhlala ibonelela ngeendawo zokulala ezimbini ezahlukeneyo, ezahlulwe ngomnyango. Ibhafu epheleleyo phakathi. Ilungele izibini ezimbini, impelaveki yamantombazana okanye uhambo lokuloba abafana okanye iholide encinci yosapho.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngezitya, izinto zesilivere, itoaster, imicrowave, ukubhaka kunye ne-cookware kunye nempahla-yiza nje igrosari yakho.
ZINIKEZELWE: Ibhedi, imiqamelo, ilinen, iitawuli, isepha elulwelo lokuhlambela, isepha yesitya, ingxowa yokulahla inkunkuma, iphepha lendlu yangasese neetawuli zephepha.
Iyunithi ine-50 ”intambo ye-HDTV, iWiFi ekhuselekileyo, intambo yeSpectrum, iRoku yokufikelela kwiNetflix yakho, iPrime, kunye nazo naziphi na ezinye iiapps ozibhalisa ngazo. Sikwabonelela ngeDVD player.
Ngelixa ixesha lokungena liyi-3:00 pm ukuya nanini na ufika! Singakwazi ukukungenisa kwangethuba, sithumele nje umbuzo oza kuwubuza ngaphambi kokuba ubhukishe, ukuze uqinisekise ukungena kwangethuba. Ukuphuma ngu 11:00 am. **Ngenxa yococeko lweCovid kunye neeprothokholi zokubulala iintsholongwane, sisenokungakwazi ukwamkela ukungena kwangethuba kwezinye iimeko**
Asiboneleli ngeli xesha: ishampu, isilungisi, isepha yebha, iikepusi zeshawa, amashwamshwam, ityuwa/pepper, ikofu, okanye iziqholo.
Undwendwe kufuneka lususe yonke inkunkuma ekupheleni kwendawo ebekelwe yona. Ukuba inkunkuma ishiywe isohlwayo se-$25.00 ngengxowa nganye iya kuhlawuliswa.
Kukho isitshixo se-elektroniki sokufikelela. Umamkeli uya kubonelela ngekhowudi ekungeneni. Ukuba nangasiphi na isizathu isitshixo sisetyenzisiwe kwaye isitshixo silahlekile, kuya kubakho intlawulo ye-$ 25.00 kwisitshixo ngasinye esilahlekileyo.
* AKUKHO zilwanyana zasekhaya, AKUKHO maqela, AKUKHO kutshaya (kubandakanya i-vaping, i-e-cig, i-hookah, imibhobho, iisiga, njl. njl.) kwiyunithi okanye kwidekhi.
Inqanaba lokungena ngaphandle kwamanyathelo. Le yunithi ayisiyiyo Iyunithi ayifumaneki kokukhubazeka.
Ezinye izinto zokuqaphela
• Akukho detector yecarbon monoxide, kuba yonke into yombane.
• Icocwe ngokobuchule.
• Isitya nesepha yesandla, iitawuli zephepha, iphepha langasese
• Yiza neetawuli zakho zaselwandle/isikhephe/epool.
Abarenta kufuneka bathobele iyunithi kunye nemithetho enzima. Naziphi na izohlwayo zokungathobeli umqeshi ziya kuvavanywa kumqeshi.
*Imithetho eposwe ngaphandle kwaye iyafumaneka ngaphakathi kweyunithi
50" HDTV ene-I-Roku, izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.65 · Izimvo eziyi-34
Hello, I am Jane D. I help manager this Airbnb account. There are 2 properties on this account, with 2 different owners The Osage Beach No stairs - is owned by Gary, he is semi retired. In my earlier years I farmed and moved to selling farm equipment. Later in life towards retirement I got into the rental business . I have always had a boat and took my kids boating any chance I could. I have been able to show my love for the water to my grandchild. We would vacation in the Ozarks over the years. What else better to do while semi retired purchase a condo in the Ozarks. Then be able to share it with others that want to enjoy what the Ozarks have to offer. Osage Beach Main Channel with a View is owned by Tom. Tom is the assistance basketball coach University of Nebraska–Lincoln . I wanted a vacation home in the Ozark's. In return I wanted to share the condo with others that wanted to experience the Ozark's.
Hello, I am Jane D. I help manager this Airbnb account. There are 2 properties on this account, with 2 different owners The Osage Beach No stairs - is owned by Gary, he is semi ret…
Iindwendwe zinokufikelela ngokupheleleyo kwi-condo yonke kunye nedekhi yabucala. Akukho zinto zomntu oza kuzisebenzela! Iindwendwe zikwavuma ukuthobela imithetho enzima kunye ne-condo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Osage Beach